Zano reBlackjack kuvatambi vemu Zimbabwe |Blackjack77
Chikuru	/ Blackjack Nzira
Zano re Blackjack
Ungada here zano rakavimbika rekuvandudza mutambo wako? Mazano edu anobata mitambo yakasiyana siyana yeblackjack.
Ungangoziva kuti pamutemo weblackjack zviri kuvaridzi vecasino kuti madheki mangani achashandiswa pamutambo umwe neumwe. Huwandu hunosiyana kubva parimwechete kusvika kumasere, izvi zvinobata marongero aunoita zano rekukunda.
Chinyorwa ichi chinotarisa kuti madheki mangani anoshandiswa pakutamba nezano rakakodzera pamutambo wako. Uchaona kuti blackjack yemadheki akawanda inoda kutambwa nemutowo wakasiyana newe dheki rimwechete.
Pamachati emazano takasarudza matanho anokupa mikana yakawanda kuti ukunde paruoko rwauri kutamba. Rangarira kuti hakuna zano rinovimbisa kukunda, asi kuziva pekusarova kunokuswededza pedyo nekukunda.
Chati reBlackjack yedheki rimwechete
Chati yekutanga yakagadzirirwa kutamba nemakadhi 52. Unofanira kutanga nechati iyi pamachati emazano eblackjack.
Unoona kuti chati iyi inokuratidza matanho ekutora zvichienderana nekusimba kweruoko rwako rwekutanga. Ona chati iyi sechati yako yekubiridzira kana uchitamba nemakadhi 52. Unogona kuprinta chati iyi wozoishandisa paunotamba mumhepo. Zvisinei, ziva kuti chati iyi haishandi mucasino isiri yemumhepo.
Zano reBlackjack yemadheki maviri
Blackjack yemadheki maviri inoda zano rakatosiyana neremakadhi 52. Ongororo iripamusoro inoratidza kuti unofanira kushandura matambiro ako zvichienderana neongororo yakaitwa navana mazvikokota kuti uve nemukana uri nani kupfuura wemutengesi.
Blackjack yemadheki maviri inoshandisa mukana wezvidobi zvakaita sekupatsanura ma 8 nema ace, nekumira kana ukatanga nemakadhi anokosha 20.
Zano reBlackjack yemadheki mana
Uyu mukana wekutamba nemadheki mana kana kuti makadhi mazana maviri nemasere. Matambiro acho akangofanana nematambiro echati ye hit stay. Ongorora zvaiswa nemutengesi patafura, nemakadhi arimumaoko ako. Wadaro wosarudza zvekuita patafura.
Zano reBlackjack yemadheki masere
Hakuna zano chairo reblackjack asi zvakangonaka kuva nechati yaunokwanisa kushandisa pamitambo yakawanda. Chati remadheki matanhatu ndiro rinoshanda pamadheki masere. Hapana chaunoshandura, shanda nechati sezvairi huye kutsungirira ndiro zano ringakwanisa kukubatsira kuti ukunde.
Ungangova wakanzwa kuti mutambo uyu une switch variation, inonakidza nekuti inokutendera kufambisa makadhi pakati pemaoko. Zvichakadaro unofanira kuongorora maoko ose wotamba maringe nezvinotevera:
Zvakakosha kusarudza zano rekutamba pane atakupa pamusoro, macasino mazhinji anokupa mukana wekusarudza mutambo waurikuda kutamba.
Pamazano eblackjack, huwandu hwemadheki haushanduri mikana yako. Ungangoda kushandura zvidavado zvichienderana nemakadhi ako, zvikadaro, magumo emutambo anowanzobuda zvinofadza mutambi kupfuura mutengesi.
Zvikasabuda sezvawanga uchifungira, ramba uchitamba nezano rako. Kazhinji unotanga kukunda ndicho chikonzero machati aya achizoshonda nekufamba kwenguva.
Kuverenga makadhi muBlackjack uchikunda pakuru
Mamwe mabhaisikopo anotowana kurudziro kubva kuzano rekuverenga makadhi. Vazhinji vanotopupura kuti rinobatsira kukunda mutengesi nekukunda pakuru. Vatengesi vakaona kuti zano iri ratove dambudziko kwavari saka iwe unofanira kuvanza nhau yekuti urikuverenga.
Kuverenga makadhi kunotsigirwa nekuona makadhi epasi neepamusoro padheki rawatopfuudza. Izvi zvinobatsira kufungidzira kuti makadhi anotevera ndeepamusoro here kana kuti epasi. Ukagona kufembera kadhi rinotevera, unowedzera mukana wekukunda.
Herino zano rakareruka pakuverenga makadhi eblackjack:
Shandisa “1” kukoshesa makadhi anobva pana 2 kusvika 6.
Shandisa “0” kukoshesa makadhi anobva pana 7 kusvika 9.
Shandisa“-1” kukoshesa makadhi anobva pana 10 kusvika A.
Tanga pana “0”, panopfuura kadhi rimwe nerimwe, tutsira kana kubvisa kukosha kuzere ( total value). kunodaidzwa kuti “running count.” Shandisa nhamba iyi kubheja kana zvakakumira zvakanaka.
Pamitambo yemadheki akawanda, shandisa “true count.” Nekuda kwehuwandu hwemadheki, tora running count woigovera kumadheki asati atambwa. Kana zvabuda zvakanaka, wokubheja.
Kana wafarira mirayiridzo yedu, idzidze usati waenda kucasino.